Namuhla, esinye sezithunywa izinhlobo ezikhanga kakhulu ihlobo iholide uhambo ngesikebhe ezindaweni emangalisayo zezwe lethu. Itholakala futhi, ziyafundisa futhi ewusizo empilweni. Lokho inketho okunjalo ushiye win win. Ngakho-ke, kulesi sihloko sifuna ngikuxoxele cruise umfula kusuka Petersburg. Inhlokodolobha enyakatho inikeza eziningi ongakhetha esihamba ku liner ukhululekile.
izindawo ezihamba phambili olibangise
Kukhethwa kuncike ngokuyinhloko isikhathi oyifunayo uhambo. A semininingwane elikhulu izindawo kuzokuvumela ukugxila kukho ezithakazelisayo kakhulu kuwe. Uma isitokwe usuku khulula eyodwa kuphela, ikhambi ekahle kungaba ukuya Valaam, Kizhi, Solovetsky Islands. Kodwa imizila eside ekuvuleni insimu ebanzi, omningi womsebenzi. Kungenzeka emfuleni Cruises kusukela Petersburg ukuba Nizhny Novgorod, Samara, Volgograd, Astrakhan. Ungakhohlwa ukhethe futhi umkhumbi, okuzokwenza wathatha uhambo. imishini yabo, ingqalasizinda, usayizi ezingengaphansi ahlukahlukene. Ulinde elikhulu,-noma ezine emithathu emphemeni imikhumbi ethokomele, ukhululekile futhi ngokuphelele bazivumelanisa kwezivakashi. Lena amahhotela yangempela elintantayo.
Sizoqala izinkambo "Weekend." Uma isitokwe has a esilinganiselwe, kodwa ngempela engifuna ukuchitha lokuyisebenzisa kahle, khona-ke wena kukhona umfula Cruises kusukela Petersburg. Ukuvakashela Valaam - kuwuhambo kuyathakazelisa siqhingi Ukuvakashela izindawo ezifana Valaam isimo Monastery, Gefmansky futhi Nikolsky zezindela. Kodwa akugcini lapho. uhambo emfushane inika abaningi benomuzwa wokuthi ngokuvamile ufuna ukuphinda futhi. Uhlelo sihlanganisa Ukuvakashela izindawo ezithakazelisayo eziningi: iziqhingi futhi Konovets Pellotsari, Sorvatala edolobheni. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukukhetha noma yimuphi umkhumbi kusuka inqwaba ongakhetha. Futhi kuyo ngeke wathatha uhambo.
Ikakhulukazi Kuyaphawuleka kukhona Cruises umfula kusuka Petersburg phezu iVolga. Kuze kuphele isikhathi lolu hambo kungaba kusuka 4 kuya 12 izinsuku lwakho olukhethile. Uhlelo ekhangayo. Uma ufuna ukubukeka kancane sihlolisise ubuhle bemvelo izwe lethu - wamukelekile! Endleleni eya eMfuleni iVolga phambi kwakho kuyokwembula zonke charm Russian North. Kufanele uhambe iNeva River neLake Ladoga, le Svir futhi Onega, kuphuma Baltic Canal futhi le Rybinsk Reservoir. Lapha, isiqondiso ethile ingashintsha kuye umzila ekhethiwe. Umkhumbi ngizoya phezulu noma phansi iVolga, inhloko-dolobha, noma Ngakolunye iyokwehla esezansi ukuba Astrakhan. Ungaba ingxenye eziningi hambo ezithakazelisayo Yaroslavl, Kostroma, Nizhny Novgorod, Samara, Kazan. Lona charm eyinhloko Cruising - nje uvakashela imizi kweshumi nezindawo ezinhle.
Thola ubuhle bemvelo
Uma abanasithakazelo wemizi yasendulo, futhi kulapho Ngifuna ukufunda isiRashiya emvelweni, inikeza emfuleni Cruises kusukela Petersburg Ladoga. Uzodinga isamba elanele isikhathi, ngakho kungcono kakhulu ukuhlela uhambo olunjalo eholidini. umkhumbi yakho ngeke zidlule Lake Ladoga, okuyinto enkulu kunazo zonke eYurophu. endaweni yaso 18,000 square metres. Kukhona olwandle oluthukuthele, efana kolwandle, futhi izimo iseduze kolwandle. Ikakhulukazi ezithakazelisayo iyona olusenyakatho ye Lake Ladoga. Zonke ezimangelengele, iziqhingi enamadwala, kuba kokubili nokhahlo futhi emuhle. Kulapha okungukuthi i-Valaam Archipelago futhi Mantsinsaari Island. Eningizimu, nechibi sincane kakhulu. Lapha isimo sezwe sishintsha, kukhona amatheku elikhulu ububanzi, sandy beach. Yonke indawo ukuthi aphinde abhukude abuyele, ugcwale kancane. Kukhona emadolobheni amancane kuphela like Priozersk.
Esikhathini esifanayo isiqondiso amanga emfuleni Cruises kusukela Petersburg eMoscow. Lokhu kungenxa abacebe ku okuvelayo kanye umzila ethokozisayo ukuthi uhlobanisa izihloko ezimbili. Wenza-ke kungenzeka isikhathi kuqhathaniswa-esifushane (isilinganiso lezi izinkambo zokugcina kusukela ngomhlaka 8 kuya 12 izinsuku) ukuvakashela imizi Elingenhla iVolga lasendulo futhi enhle: Myshkin, Uglich, Kalyazin, Dubna. Ngamunye wabo umqaphi hhayi kuphela amasiko isiRashiya, kodwa futhi ezikhumbuzo bokwakha lasendulo. Kukhona ngempela into ukubona. Futhi ebhodini uzothola wokuqala wenkonzo ekilasini nokuzijabulisa iziqhumane.
River Cruises kusukela Petersburg eRussia zihlanganisa amaziyo kuqala nge imizi ezithakazelisayo kakhulu ezweni lethu. -Drive azungeze Golden Ring of Russia ezweni kungenzeka Nokho, lolo hambo kudinga isikhathi esiningi ukuchitha ngendlela okungukuthi amathayi uqine ngokwanele. Kodwa amanzi ibanga elifanayo uhamba kulula futhi zize zijabulise. Lokhu uhambo izinsuku 5-12. Kodwa isethi emadolobheni owavakashele kuzoncika ukuvakasha abakhethiwe. Lokhu Kostroma, Yaroslavl, Sergiev Posad nabanye abaningi.
Uma unesithakazelo amagugu amasiko, zikhona emangalisa emfuleni Cruises kusukela Petersburg eRussia ukubuyela Petersburg. Ukudluliselwa ku Lodeyskoe ensimini igcwele Ukuvakashela izindawo ezingcwele. Uzobona Holy Trinity Alexander-Svirsky Monastery. Kusuka lapha ungenza uhambo ehlukaniselwe Old Ladoga, lapho ezohambela inhloko-dolobha yokuqala ERussia yasendulo, le nqaba netshe lokukhubekisa St George Temple nomsinga St Nicholas Monastery, ethempelini Ioanna Zlatousta. Kulolu hambo kuzophela. Uzothola Svirstroy futhi Kizhi Reserve, okuyinto adumile njengoba Museum ezivulekile bokwakha Russian. Lapha izivakashi uzochitha lonke usuku, bese uqhubeke indlela Solovki. An leziqhingi White Sea, esakhiwa 6 esikhulu lenqwaba eziqhingini ezincane. imvelo emangalisa owuthanda futhi ikunika umuzwa ngokuphelele ongenakulibaleka.
Russia - zwe elikhulukazi kanye nemizi emikhulu nemihle imvelo ebukekayo. Igcwele ezikhangayo eziningi kangaka, izikhumbuzo nezindawo nje enhle ukuthi ubone konke akwanele, mhlawumbe, ukuphila. River Cruises uvumele eyodwa kuphela iholidi ukubona abaningi kangaka, njengoba kwakunzima nokuyicabanga. Noma ngabe kwasala emfushane ngempelasonto ikhefu, ungakhetha bona indlela ezithakazelisayo. Yini inzuzo ngaphezulu emfuleni Cruises? Lolu hlobo lwe-uhambo ilungele kokubili ngabantwana nangabantu abadala. Bright Uhlelo ukuzijabulisa ebhodini ngeke sivumele noma ubani ukuba uthole nesithukuthezi futhi ikuthinte emangalisayo.
Indlela ukupheka nectarine ujamu ebusika
Ukungasebenzi kahle kwe-Erectile nesifo senhliziyo
Umdlali wasesiswini German Sebastian ukhwele: Biography kanye nomlando umsebenzi